Dlala i-Flappy Bird kusuka kukhonsoli nge-Sfb i-clone ebhalwe ku-GNU sed | Kusuka kuLinux
Abaningi bethu basebenzise amahora amaningi bedlala umdlalo odumile Flappy Bird noma yimaphi ama-clones akhishwe ngemuva kokuhoxa kwawo ku-App Store naku-Google Play Store. Lo mdlalo oyisisekelo kodwa onamandla angenakulinganiswa okulutha, ubulokhu ulandwa kakhulu ezitolo zezicelo zomhlaba, kuze kube yilapho umdali wawo ethatha isinqumo sokuwuhoxisa ngezizathu ezingakacaci kahle.
Abathandi besikhumulo abakwazanga ukushiywa ngaphandle kwegagasi lama-clones avele ngemuva kokunyamalala kwe-Flappy Bird yangempela, ngakho-ke ngemicabango eminingi nangemigqa embalwa yekhodi umlingisi okwazi ukwenza i-SFB clone ebhalwe ku-GNU sed, ngoba singakujabulela ukudlala i-Flappy Bird kusuka kunoma iyiphi i-terminal kunoma yikuphi ukusatshalaliswa kwe-Linux.
Futhi yize lo mdlalo wanyamalala eminyakeni embalwa eyedlule, abaningi bangahle bangazi futhi bafuna ukubheka le GamePlay, okuyiyona engenza ngihleke.
1 Yini i-Sfb?
2 Ungayidlala kanjani i-Flappy Bird kusuka ku-console nge-Sfb?
2.1 Ukulanda nokusebenzisa i-Sfb
2.2 Imodi yegeyimu nokhiye wokusebenzisa
Kuyisimo somdlalo odumile weFlappy Bird obhalwe ku-GNU Sed nguValeriy Kireev, esivumela ukuthi sidlale iFlappy Bird kusuka kukhonsoli, inezitayela ezintathu zesethulo: ayikho, elula futhi egcwele, lapho izikimu zayo zemibala ziyahlukahluka.
Umdlalo uqukethe umdlali olawula inyoni ezama ukundiza phakathi kwemigqa yamapayipi aluhlaza ngaphandle kokuyithinta, ngoba lokhu usebenzisa ukhiye owodwa kuphela. Isimo sihamba sibheke eceleni.
Ungayidlala kanjani i-Flappy Bird kusuka ku-console nge-Sfb?
Ukulanda nokusebenzisa i-Sfb
Imodi yegeyimu nokhiye wokusebenzisa
Ukududuza inyoni kumele sisebenzise ukhiye k okuzosisiza ukuyibeka phezulu. Ayinakho okunye ukunyakaza okusetshenzisiwe, okufana nenguqulo yoqobo
Ngendlela efanayo, umdlalo unezikimu zombala ezintathu esingazibona ngeso lengqondo: none, light futhi full. Kufanele ukhethe eyodwa lapho uqala ukuyidlala ngokuyidlulisa njengengxabano yomugqa womyalo.
none kungukubonakaliswa kwezinkundla zemidlalo. Kubi impela futhi kuyisicefe ukudlala.
Dlala i-Flappy Bird - Ayikho Imodi
light ingasetshenziswa uma kwenzeka imodifull yihamba kancane noma icace kuwe. Kuhle impela ukudlala kule nguqulo.
Dlala i-Flappy Bird - Imodi Yokukhanya
full Yinguqulo enhle kunazo zonke futhi ingivumela ukuthi ngimele ngokufanayo ngangokunokwenzeka, indawo yasekuqaleni yeFlappy Bird.
Dlala i-Flappy Bird - Imodi Egcwele
Ngokungangabazeki kulabo abasabambekile kulo mdlalo futhi abafuna nokubulala isikhathi esithile bedlala kukhonsoli, lo mdlalo omncane uzokwenza kahle impela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Dlala i-Flappy Bird kusuka kukhonsoli nge-Sfb i-clone ebhalwe ku-GNU sed